Cali waa gob ee Garmaqaate ayaa helay
Dr Cali Khaliif Galaydh waa nin ka rajo-dhigay Soomaaliya oo jecel wadajirka walaala waqooyi iyo inay noqdaan dawlad madax-bannaan oo caddaalad ku dhisan. Waa nin aqoontu ka xoreysay oo ka sifaysay qalbigiisa cuqdad, xaasidnimo, isla-weyni iyo qabyaallad. Bal u fiirso siduu habeenkii dhaweyd u ammaanayey walaalkii/ saaxiibkii Siilaanyo wax kasta oo dhex maray beelahay ka soo kala jeedaan iyo si kasta aragtida ugu kala beydheen xilliyada qaar.
Mudane Cali waa nin haatan jooga aakhirul cimri sidaas aawadeedna doonaya inuu ka tago raad midnimo hase yeeshee cid la garata ayuu la’yahay. Kor iyo hoos ba wuu ula hadlay madaxda Somaliland iyo beesha dhexe siiba raaska madaxweynaha ee Somaliland ay u af-duubantahay. Xaqiiqduna waxay tahay Cali waa gob ee Garmaqaate ayaa helay.
Muuse mid baannu leeyahay, Madaxweyne Muusow haddii aad manfacii iyo masabkiiba aad ku koobtay xaafadaada, ogow Gol-janno iyo Gebiley ma noqon doonto dawlad madax-bannaan, shacabka beriga Somalilandna waxay la dareen yihiin Cali Khaliif Galaydh iyo dadkuu matelayo ee uu u yahay Geed-joogahooda.
Sidaas aawadeed Muusow Labo mid baa kula gudboon inaad fuliso heshiiskii Caynaba iyo inaad ummadda usheegtid sababta aadan u fulin karin. Laakiin xal ma noqonayso inaad ummadda u dhagoolayso oo aad qol isku soo xidho.
Cali mid baan leeyahay, Dr Caliyow badi shacabka Somaliland waa ogyiin inaad gar leedahay oo aad daacad ka tahay midnimada iyo wadajirka Somaliland oo ku heli karta madax-bannaanideeda sinnaan iyo caddaalad oo keliya, ha yeeshee aad garawshiyo ka ladahay madaxweynaha haatan. Waxaan leennahay Caliyow fadlan samir intii badnaydba samirtayee. Hadddii xukuumadan ka gaws-adeegtay fulinta heshiiskii waa la beddeli ee Waddani meel wax la dhigo iyagaa heli doorka danbe siday u muuqatee.
Cabdirisaaq Maxamuud Baynax